SONATA-CANTATA: မရေးတတ်၍ ရေးလိုက်ပါသည်။
မသီတာရေ..ရေးသာရေးပါ။ စာရေးခြင်းဆိုတာက စည်းမျဉ်းဥပဒေသတွေအတိုင်း လိုက်
ရေးဖို့ ကြိုးစားလို့ ရေးတတ်တာရှိသလို၊ ရေးချင်ရာရေးပါများလာရင်းကနေ စည်းမျဉ်းတွေ
နားလည်သွားတာလည်းရှိတယ်။ ပင်လယ်နားနေတဲ့သူကို ရေကူးသင်ပေးစရာမလိုပဲ ရေ
ကူတတ်သလိုပေါ့။ ရေကူးတတ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ ရေကူးသင်တန်းတတ်လို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပင်လယ်
“မ“ ရေ… စကားပျာလေးတွေက အတော်ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်… ဆွဲဆောင်မှုလဲရှိတယ်… ကျွန်မအတွက်တော့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့စာတပုဒ်ထက်
ခံစားလို့ ရတဲ့စာတပုဒ်ကို ပိုနှစ်သက်တယ်… ဆက်ရေးပါ… အားပေးနေမယ်
Writing down your worries and doubts makes you feel better.
from the movie .:: 1 litre of tears ::.
ဘယ်လောက်ရေးရေး ဘာရေးရေး တစ်ခုခုရေးထားတာ မြင်ရရင် ဝမ်းသာပါတယ် =)